Archives an'ny Akademia »University of Hodges
100% Taham-panadinana nasionaly
100% Taham-pahafaham-panadinam-pirenena miarahaba ny kilasy mpanampy mpanampy ara-batana ao amin'ny Hodges University 2017 ho an'ny taham-pahaizana 100% amin'ny fanadinana nasionaly! Fomba hanehoana an'i Hodges U! Faly be izahay miantso anao hoe Alumni Hodges hajaina.	Hamaky bebe kokoa
Ny lalan'i Hodges mankany amin'ny fahombiazana dia manome fandaharana vaovao sy fahazoana miditra
Ny lalan'i Hodges mankany amin'ny fahombiazana dia manome fandaharana vaovao sy fahazoana idirana Ho ezaka hanomezana mpianatra ny “fandaharana vaovao sy fidirana bebe kokoa”, i Dr. John Meyer, filohan'ny Oniversiten'i Hodges, dia miresaka momba ny lalam-baovao ho an'ny fahombiazan'ny oniversite amin'ny sabotsy 27 oktobra 2018 fanontana ny Naples Daily News. Vakio eto ny lahatsoratra feno. Tsidiho ny pathways.hodges.edu hahitana [...]	Hamaky bebe kokoa
Mpitarika any an-trano - #MyHodgesStory ho an'i Jacob Winge Jacob Winge dia ohatra iray marina amin'ny dikan'ny hoe mpitarika, ary toa an'i Winge, ny ankamaroan'ny mpianatra izay misafidy ny hahazo diplaoma dia maniry ny ho lasa zavatra bebe kokoa - handray andraikitra ary hanao akony. Tany amin'ny faha-20 taonany vao niditra tamin'ny [...]	Hamaky bebe kokoa
Tombontsoa telo amin'ny fahazoana diplaoma hampandrosoana ny asanao
Tombontsoa telo amin'ny fahazoana diplaoma hampiroboroboana ny asanao olon-dehibe mianatra any an-tsekoly noho ny antony maro samihafa. Matetika, manelingelina ny fiainana ny fiainana ary mahatonga antsika hametraka ny tanjontsika manokana; na izany aza, raha nahita ny tenanao nijanona teo amin'ny asanao ianao, ny fiverenana an-tsekoly no mety ho valiny nomena anao [...]	Hamaky bebe kokoa
Ireo matihanina mahomby amin'ny asa aman-draharaha dia mamantatra toetra mampiavaka ny mpitarika tsara
Ireo matihanina mahomby amin'ny asa aman-draharaha dia mamantatra ireo toetra mampiavaka ny mpitarika tsara isika rehetra, afaka mamantatra ireo mpampiasa na mpanampy lehibe eo amin'ny fiainantsika isika, saingy indraindray sarotra ny hamaritana ireo fahaiza-manao izay nampiavaka azy ireo manokana - indrindra rehefa tsy nitana andraikitra tamin'ny fitarihanao ianao. Mpitarika mahomby ve ny olona iray izay afaka mamaritra fotsiny [...]	Hamaky bebe kokoa
Fomba 4 ahafahan'ny MBA manampy anao hampandroso ny asanao
Fomba 4 ahafahan'ny MBA manampy anao hampiroborobo ny asanao ara-tantara, ny làlana mankany amin'ny fandrosoana amin'ny asa dia nahitana fanoloran-tena sy fahombiazana miavaka ao anaty fikambanana iray. Ny fahavononan'ny mpiasa sy ny fahaizany miatrika fanamby vaovao dia toa ampy. Ankehitriny anefa, ny ankamaroan'ny indostria dia mifaninana tokoa ka ny mpirotsaka dia toa mila manao bebe kokoa [...]	Hamaky bebe kokoa